သစ္စာအလင်း: အဝိဇ္ဇာ ပြု တဏှာ စုသဖြင့်......
အဝိဇ္ဇာ ပြု တဏှာ စုသဖြင့်......
အမှု စုံ လှပါသော လူ့ ဘုံတော မှာ မသိခြင်းများစွာ ဖြင့် ရောက်ရှိနေထိုင်ရပါသော ကျွန်မ တို့ မှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အမှုကိစ္စ များကို စီမံစရာရှိတာ စီမံပြီး တဲ့ အချိန် မှာ နောက်ထပ် အကုသိုလ် မဖြစ်ရအောင် ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော် ဘုရားကဆုံးမ ပါတယ်..။
ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါ အပြစ်မတင် နဲ့ နော် အဓိက တရားခံက မူလနှစ်ဖြာ……တဲ့..။
မူလနှစ်ဖြာ ဆိုတာ ကျွန်မ တို့ အားလုံး ကိုချာလပတ်ရမ်းစေသော…. ကြိုးကိုင်ချယ် လှယ် နေပါသော
သံသရာဝဋ်နှောင် တုပ်နှောင် ထားအပ် ပါသော …..အဓိက တရားခံ..။
အဝိဇ္ဇာ က အရာရာကို ပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်မှု …ပညာ အလင်း မှန်သမျှ ပိတ်ဖုံးပေးထားတာ..။
တဏှာ က တော့….ချော့ကာ ချော့ကာ အကြိုက်ပေး လို့ မိုက်ဆေးတွေ ဖေါ်ကြတာ..
လူ့ သမိုင်းတစ်လျှောက် စာစီရေးထိုးပါက ကုန်အံ့ မထင်..။
တဏှာ က အာရုံ ကိုချုပ် စပ်ခြင်း ၊ အာရုံ ကိုကပ်ညိခြင်း …… ကပ်ညိ မိသည် မှာ ဗိုက်ဆာ သော မြွေ က သူ့အစာ ဖားကိုမလွှတ်သလို…..။
တစ်ပန်းဟိုက်ဟိုက် တစ်ရှိုက် ငင်ငင်…….
လိုချင် ဖြစ်ချင် ရချင် ပြီ ဆိုပါက ……
မလုပ်ရဲတာ ဘာမှ မရှိတော့…. မလုပ်သင့် ဘူးဆိုတာ ဘာမှ မသိတော့…….။
ကျွန်မ တို့ တတွေ ကိုမောင်းနှင်နေတဲ့ အဲဒီ….. ချင် တစ်ခု ကြောင့်ပဲ….
အာ ဏာ ကိုယစ်မူးလိုချင်တော့…ဖခင် အရင်း အစ်ကို အရင်း ကို သတ်ခဲ့ တဲ့ဇာတ်လမ်း များစွာ ရာဇဝင် ထဲ ရှိခဲ့တယ်..။
ထိုင်း ဆူခို ထိုင်း ရုပ်ရှင် ထဲမှာ ကြည့်ဘူးတာ… သေအံ့ မူးမူး ရှင်ဘုရင် ကို တစ်ချိန်က အချစ်များစွာ နဲ့ ပြုစု လုပ်ကျွေး ခဲ့ သူ မိဘုရား က နန်းဆောင် ထဲ မှာ အဆိပ်ကျွေး သတ်…… စီမံပေးတဲ့ မောင်းမတွေ ကို မိဘုရား ကဒါးထုတ်ခေါင်းဖြတ်သတ်……….။
အမွေ လိုချင် မှု နဲ့ သွေးရင်းသားရင်းတွေ ကိုလည်းသတ်…။
အချစ် ဆိုတာ များ ရလေမလား လို့ တပါးသူ ရဲ့ အိမ်ထောင်များ သတ်ကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းများလည်း ဖတ်ဘူး မှတ်ဘူး ခဲ့တာ..။
နောက်တော့……ကာမ တဏှာ… ကိလေသာ ကာမ တွေ သုံးဆောင်ခံစား ရလေတိုင်း အမြဲခံစား ချင် တဲ့ ချင်တစ်ခုကြောင့် ပဲ လူတွေ လူတွေ………..။
စီးပွား ရေးနောက် တကောက်ကောက်…။ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် ဆို သူ့မှာ လက်ရှိသိန်းတစ်ထောင်လောက်ချမ်းသာနေပါလျက် နဲ့ အရင်က ရခဲ့ဘူး ပြီး ဆုံးရှုံးသွား တဲ့ သိန်း ၅ ထောင်လောက်အတွက် စိတ်ဒုက္ခ ခံစားနေရသည် မှာ ဘာ မှ ကိုမလုပ်နိုင်..။စိတ်အေးချမ်းမှု မရ..။
တိရိစ္ဆာန် တွေ သတ်ဖြတ်တာ စားဘို့ တစ်ခု ထဲ ကြောင့်....
ကျွန်မ တို့ လူတွေက တော့ ... ရဘူးတဲ့ စည်းစိမ် ချမ်းသာ
ပူဇော်အကျော်အစော...ယုတ်လျော့ သွားမှာ စိုးလို့..မပိုင်ဆိုင်ရမှာ စိုးလို့ ကျူးလွန်ကြတဲ့ အကုသိုလ် များ စွာ ရှိကြမှာ..။ကျွန်မ သည်လည်းဆင်ခြင်ရပါတယ်..။ ငါကော..ငါကော..... ငါကော...ပေါ့လေ။
လူတစ်ယောက်က ခဲ နဲ့ ပစ်တဲ့အခါ..ခြင်္သေ့ ကပစ်တဲ့ လူနောက်လိုက်ပြီး နှိမ်နင်းသတဲ့..။
ခွေးကတော့ ခဲနောက်လိုက် တယ် တဲ့..။
ပစ်ဖန်များ လာတဲ့ ခဲတွေ ရပ်စေချင်ရင် တော့ ကျွန်မ တို့ ခြင်္သေ့ လို ကျင့်ကြံ ရမှာ မဟုတ်ဘူးလား..။ ခဲနောက်လိုက်မလား...လူနောက်လိုက်မလား ပေါ့..။
တောင်မြို့ ဆရာတော် -အရှင်ဇနကာဘိ ဝံသ ရေးတဲ့ စာအုပ်ထဲက တဏှာ အကြောင်း ကဗျာ တစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ရှု ပူဇော် ရင်း ကျွန်မ ရင် ထဲက …ချင်….. တွေကို ကျွန်မ ကြိုးစားထိန်းချုပ်ပါအုံးမယ်..။
((တဏှာသောတေန ဝုယှ န္တာ
ယာဝါပါယာ နိမုဇ္ဇ န္တိ
သတ္တာ သံသာရ သာဂရေ။))
သံသာရသာဂရေ - သမုဒ္ဒရာ မကသာသည့် သံသရာပြင်ကျယ် ပင်လယ် ခရီး၌
တဏှာသောတေန - အဝိဇ္ဇာ ပြု တဏှာ စုသည့် အနုဿယ သဘော ရေယဉ်ကြောဖြင့်
ဝုယှန္တာ -ဒုက္ခစုကြွယ် ၊ ထု အထည် ဖြင့် ၊လူ့နှယ် တစ်တန် ၊နတ်ဟန် တဖြာ ၊ ဗြဟ္မာ ဟန်ပုံ ၊ သဏ္ဍန်စုံအောင် ဆန်စုံမျောပါး ၍ နေကြရကုန်သော
သတ္တာ- ဘုရား အဆူဆူ မလွယ်ကူ၍ ဆယ်ယူမသွား ငါတို့လို အညံ့စားသတ္တဝါတို့သည်
ပိယောမိဝေဂစာလိတာ -အချစ်ဂိုဏ်း အတွက် လှိုင်းဂယက် က ဝိုင်းလျက်အဖုံဖုံ တခုန် ထဲခုန်စေအပ်ကုန်သည်ဖြစ်၍
ယာဝါပါယာ- ဆင်းရဲမှန်က မကျန်ရအောင် စံပြ မလွယ် အပါယ်လေးတန်အောက်သံသရာ ဟိုးသမုဒ္ဒရာတိုင်အောင်
နိမုဇ္ဇ န္တိ - ဦးခေါင်းမူကာ မပြူသာ ပဲ ၊ နူရာမှာ ဝဲ ၊ ဒူလာစွဲသကဲ့သို့ ရှေ့လည်းနောက်တိုး အပြစ်မျိုးကြောင့် ညစ်ဆိုးပေတေ၊ ကံစနစ် ထုတ် အသစ်ရုပ်ဖြင့် တနစ်မြုပ်တည်းနစ်မြုပ်၍ နေကြလေသတည်း ။
( ခေတ္တ - ရွာငံ Genius Coffee Estate )
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 5:52 AM
ခေါင်းစဉ် ကျွန်မ ရဲ့ သံဝေဂများ, ဓမ္မကိုနားလည်ခြင်း
ကျွန်မ ရဲ့ သံဝေဂများ (25)
ဓမ္မ ကိုနားလည်ခြင်း (23)
Dhamma Sharing (8)
Course in Buddhism and Consciousness with Dr Georges